काठमाडौँ- बिहिबार सुनसरीमा हरिनगर गाउँपालिका २ का ५६ वर्षीय मौलाना खुर्सीद अन्सारीको गोलि प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो। भारतीय बजारबाट नम्बर प्लेट नभएको मोटरसाइकलमा दुई जना सवार रहेका अज्ञात समूहले गोली चलाएको कारण मृत्यु भएको थियो।
गोलि चलाएर हत्याराहरु भारत तर्फनै फर्किएका थिए। बजार घुमफिर गर्नका लागि निस्केका बेला अन्सारीमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा उनको टाउको र छातीमा गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार भारतीय प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको थियो। सन् २००८ मा भारतका विभिन्न शहरमा भएको शृङ्खलाबद्ध बम आक्रमणमा संलग्न रहेका आतंकवादीहरुलाई खुर्सीदले संरक्षण दिएको भारतीय सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ।
एक समयमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले कुटनीतिक माध्यममार्फत खुर्सिदलाई सुपुर्दगी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर तत्कालिन एमालेका जिल्ला नेता रहेका खुर्सिदलाई भारत सुपुर्दगी गर्न वामदेवले अस्विकार गरेका थिए।
इन्डियन मुजाहिद्दीनका आतंकवादीहरुलाई नेपालमा नागरिकता र पासपोर्ट दिलाउन सहयोग पुर्याएको कारण उनी भारतीय सुरक्षाकर्मीको नजरमा रहेका थिए। भारतीय गुम्पत्चार निकाय “रअ”ले पछिल्लो समय खुर्सीदलाई नियाली रहेको बुझिएको छ।
समय-समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले खुर्सीदको घरमा छापामार्ने गरेको भएता पनि पक्राउ गरेर लैजान भने सकेका थिएनन्। घटनाको प्रकृति हेर्दा खुर्सीदको हत्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी संलग्न भएको जस्तो देखिन्छ ।
काठमाडौंको लैनचौरस्थित राजदूतावासमा रहेको ‘रअ’का प्रतिनिधिहरूले खुर्सीद माथि निगरानी राखेर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुलाई सूचना दिइरहेको एक श्रोतको बुझाइ रहेको छ। राजदूतावाबाटै प्राप्त सुचनाको आधारमा खुर्सीदको हत्या भएको हुन सक्छ।
प्रकाशित : शनिबार, असोज ०६, २०७५१४:४२
छक्कापञ्जा–३ : घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आउने , यस्तो बन्यो ट्रेलर ![ट्रेलर सहित]
राष्ट्रपतिको हत्या गर्न खोजेको आरोपमा ३ जना पक्राउ !
स्ववियू चुनाव नेविसंघले हार्ने भएपछि कांग्रेस मिति सार्न खोज्दैछ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
खराफी नेशनल कम्पनीमा कार्यरत बिचल्लीमा परेका कामदार नेपाल फिर्ता !